Aqoonyahan reernimo ku ololaaynaya jaahil qalbi fiican ayaa dhaama. QalinkiiAxmed Xasan Ibraahin ( AXMED SAKI) | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Aqoonyahan reernimo ku ololaaynaya jaahil qalbi fiican ayaa dhaama. QalinkiiAxmed Xasan Ibraahin ( AXMED SAKI)
Posted by admin on November 7th, 2017 08:57 AM | FADHIGA SUBULAHA
Marka hore waxaan salaamayaa dhamaan umada muslimka ah gaar ahaan mujtamaca reer soomaaliland oo aan leeyahay ASAALAMU CALAAYKUM WARAXMATULAAHI WABARAKAATUHU.
Marka xiga Alle ayaa mahad oo dhami u sugnaatay, waana inaaynu ugu ee mahad naqnaa nimcada eebe ina siiyay ee aay ugu horaayso nabadgalyadu.
Waxaan qalinka u qortay inaan waxogaa ka idhaahdo marxalada wadankeenu marayo oo runtii ah marxalad u baahan in si cilmiyaaysan looga hadlo bulshadana loo iftiimiyo khaladaadka ka dhaawici kara qadiyada , kalsoonida iyo wax wada lahaanshaha reer Somaliland ku soo caano maashay mudo ku dhaw sodon sano .
Markaad eegto heerka aqoonta maanta wadanku marayo waxaa aad arkaysaa in guri walba aay maanta joogaan ugu yaraan laba ama saddex ka baxay jaamacadaha wadanka ama qaar dibadeed ba , halkaas waxaad ka dareemaysaa in aaynu heer fiican ka gaadhnay xaga aqoonta mid maadiya iyo mid diineedba . Iyada oo taasi jirto hadana waxaad is odhanaysaa dadkani waxba muu baran , maanta iyo maalintii wadanka lagu soo noqday waxba isma dhaamaan dadka garaadkiisu.
Aqoontu waxaay dhistaa maskaxda waxaanay ka dhigtaa mid si fiican u fikirta , kala saarta waxyaabaha ku hareeraysan mustaqbalkoodana odorasta , taas badalkeeda hadii qofka aqoonta bartaa la mid noqdo kaa jaahilka ah macnaheedu waa waxba muu baran wakhtiga ayuunbaa ka lumay waayo waraaqdu shahaadadu waxba ma tarto .
Waxaaynu ku jirnaa wakhti loo baahan yahay inaay aqoonta la kaashado loo jeel qabo si wadanka looga saaro qabyaaladan baahsan , nin jeclaaysiga iyo siyaasigan kolba shaadh soo xidhanaya ee danaaystaha ah. Akhriste waxaad in badan aragtay siyaasi la hadlaaya bulsho oo wax alla wax laga qoro aanad garanaayn taas waxaa ka sii daran dadka dhagaaysanaya ee sacab iyo mashxarad la barbar taagan .
Wakhtiga ololaha saddexda xisbi oo kii Alle u qoraa heli doono , waxaay ahaayd in si cilmiyaaysan loo dhugto balanqaadkooda iyo waxtarka aay kaga duwan yihiin mid ba midka kale iyadoo gobol ,degma iyo xaafadiba aay ku dabaqaayso baahida haaysata hordhigaaysana musharaxa tartamaya iyadoo isku duuban cidiii toontaa ha degto waayo iyada ayuu ilaahay isbaday .
Waxaan la yaabay xaafad yar oo laga yaabo inaay 3000 kun qof deganyihiin oo hadana la kala safan saddex musharax iyagoo ku saleeyay reernimo iyo dano kale.
Akhriste waxaa meesha ka baxday dadkii aqoonta lahaa ee bulshada indhaha u noqon lahaa , taas iska daayoo iyagaaba ugu jibo iyo caadifad xun , intaaynu sidaa nahayna lagama yaabo inaaynu horumar gaadhno mid shakhsiya iyo mid guud ba .
Dhalinta maanta wax soo baratay ee la qalday lagana dhaadhiciyay hebel ayaa reeraheena ah bari hadduu waayo muxuu dareemayaa ? haduu helo se ma siinayaa shaqo aan imtixaan iyo garsoor aan soo marin ? dhalinta waxaan leeyahay waxba ugama baahnid hebel iyo hebel toona aqoontaada ayaa wax kuu ah ku cabir kii waddanka wax u qabanaya
Waalidka waxaan leeyahay ka daayo ubadka waxaad ku akhriyaaysaan ama wax bara oo u sheega inuu aqoontiisa aamino ama guriga ha iska jooge ee suga inta uu nin reerkooda ahi xilka qabanayo lacagtana ha iska dhamaaynina bal inuu shaqo siiyo.
Akhristayaal marka dhalintu ka cabanaayso shaqo ma taal oo qabyaalad ayaa wadanka taal oo la isku shaqaalaynayaa iyo markaay u heelan yihiin nin reerkooda ah gar iyo gardaraba iyamaay qaldanyihiin?
Waxaad arkaysaa hebbel oo aad ku taaqanay qof aqoon leh oo baraha bulshada ku caayaya musharax kale oo aan isbarbardhig samaaynaayn si aqooni ku dheehantahayna bulshad wax ugu iftiiminaayn , kuna doodaya yaan laynaga badin. Akhriste marka dadkii wadanka wax u bartay sidaa yihiin maxaad ka filaysaa caamadii iyo carruurtii.
Soomaaliland aaynu badbaadino, siyaasigu wax walba wuu ogyahay , yaan caqligeena la caayin waxwalba yaaynaan sacabka u tumin , siyaasadu ma laha saaxiib joogta ah waxaay leedahay dan joogta ah , doorashada ka bacdi waddanka waa loo siman yahay reer walba wasiiro wuu heli doonaa , loogama tago waanu is haaynay iyo waay ii codeeyeen toona.
Isdhaxgalka , isku soo jiidka iyo iskaashigu waxaay dhisaan mustaqbalka qofka wadan ka mustaqbal ka raba ee wax u soo bartay , ha ku si foobin xag jir ( racist ) wax reebo oo ka fikir sidaad dhexdhexaad wadanka ugu noqon lahaayd codkaagana bilaa xajiin dhiibo.
Axmed Xasan Ibraahin ( AXMED SAKI)
« Ethiopian-born billionaire Mohammed Hussein Al Amoudi detained in Saudi anti-corruption crackdown
DAAWO Musharax Ciro oo soo Dhawayn dhoolatus ah kala Kulmay Ceerigaabo Aabo Soo dhawoow »